Global Voices teny Malagasy » Andron’ny Mahatsiravina Ao Gaza, Mandaroka Baomba Ireo Toeram-ponenana Manodidina i Israely, Mihoatra Ny 450 No Maty · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2014 6:09 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika avylavitra
Nanoritsoritra ny loza mahatsiravina hitany ireo vavolombelona nahita maso tao Gaza arakaraky ny fitombon'ny isan'ny maty taorian'ny iray andro sy iray alina nandarohana baomba ny fari-ponenana ao Al-Shejaia, any amin'ny manodidina ity tanàna atao fahirano ity. Androany no andro faha-13 hatramin'ny nanombohan'ny “Hetsika Fiarovana Maranitra,” nataon'i Israely ho valin'ny fahafatesan'ireo  zatovo Israeliana telo.
Niaraka daholo ireo mpikatroka mafàna fo sy loharanom-baovao Palestiniana nilaza fa 437 hatreto no Palestiniana namoy ny ainy, ka anisan'ireny ireo zaza amam-behivavy marobe, ary an'arivony no naratra. Milaza ihany koa ireo loharanom-baovao fa eo amin'ny 13 eo ny miaramila Israeliana maty .
Anaty tarehimarika mazava, manoratra ho an'ireo 13.400 mpanjohy azy i “Palestianism” izay manora-tena ho toy ny “loza mitatao ara-demaografika ho an'i Israely; sivily iray” :
Andro faha-13 – Voamarina – Palestiniana 437 maty. #Gaza
Mihoatra noho izay efa hitan'ny Palestiniana hatrizay nanombohan'ity ady ity ny zava-dozan'ny androany, indrindra fa ny fanafihana manokana nanjo an'i Al-Shejaia mpifanolo-bodirindrina amin'i Gaza. Mibilaogy ilay sedra ao anatin'ity sary ity  [TANDREMO: sary mahery setra] i “Occupied Palestine” ary ao amin'ny “Electronic Intifada”, mitatitra  i Ali Abunimah hoe:
Lehilahy am-polony maro, zaza amam-behivavy no maty vao mangiran-dratsy ny Alahady raha nandaroka baomba tsy misy fanavahana ny tao Shujaiya tanàna atsinanan'i Gaza ny Israeliana.
Vatana mangatsiaka teo amin'ny 60 teo no nosokirina avy tany ambany korontan'ireo trano rava, ary maherin'ny roanjato ny isan'ny naratra, hoy ny nambaran'ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Fahasalamana Palestiniana, Dr. Ashraf al-Qidra, tamin'ireo mpilaza vaovao ao an-toerana.
Avy ao Gaza, hoy i Mohammed Abu Sadaa ho an'ireo 1.400 manjohy azy ao amin'ny Twitter.:
Nibitsika aho tany aloha hoe ny tamin'ny Zoma no tena feno rà nandriaka. Fa mihoatra noho ny tamin'ny Zoma ny androany ary mbola mitohy ny fanisàna. Ary ahiako ny mbola hahatongavan'ny iray mbola be rà latsaka kokoa noho ny androany! #StopIsrael
Anaty andianà bitsika, mizara saripika marobe ihany koa izy ahitàna ny vono-olona androany tao Al-Shejaia, izay raha kely indrindra nahafatesana toy izao. Ireto ny sasany tamin'izy ireny:
Vono-olona tao Al-Shejaia atao AN-TSARY ..<11> pic.twitter.com/ud8dpcdwg6 
Vono-olona tao Al-Shejaia atao AN-TSARY ..<9> pic.twitter.com/ud8dpcdwg6 
Vono-olona tao Al-Shejaia atao AN-TSARY ..<1> pic.twitter.com/ud8dpcdwg6 
Soritsoritan'i “Palestiainism” ho “tsy azo saintsainina” ny faharavàna sy ny fatiantoka :
Shajaiya, atsinanan'i Gaza. Tsy azo saintsainina ny faharavàna sy ny fatiantoka. #Gaza pic.twitter.com/jcohaiFNlX 
Androany, vaviantitra iray 90 taona efa maty no naterina tato aminay. Efa telo andro izy no maty, tsy afaka nanatona ny tranony ny mpitsabo.
Ary misaona ny faharavàn'ny tranon-drazany i Mohammed Ziara :
Tanànan'i Al-Shejaia, mpifanolo-bodirindrina amin'i Gaza, tanàna niavian'ny fianakaviako, nanjary fatin-korontana noho ny daroka baomba tsy mitsahatra ataon'i Israely.
Lina, Palestiniana iray avy ao Gaza, monina any Qatar, mitatitra hoe:
Milaza amiko i Neny fa nahita ireo olona nandositra ny tranony avy ao Shejaia, nolazainy fa nilanja saina fotsy izy ireo, tahaka ny hoe horaharahain'ny Israeliana izany
An'arivony ireo Palestiniana nandositra ny tanàna manodidina satria niha-henjana ny ady, na dia tsy hita hoe aiza aza no toerana haleha. Gaza, ahitàna Palestiniana 1,8 tapitrisa, dia nofaritana ho ny “fonja an-kalamanjàna midadasika indrindra erantany .” i Israely no ao amin'ny sisintany ilany, ary Ejipta no ao amin'ny ilany.
Marobe ireo mpisera amin'ny aterineto no nizara ity lahatsary ity avy amin'ny mpanolotra fandaharan'ny Al Jazeera ao Gaza, Wael Al Dahdooh, izay latsa-dranomaso raha eo ampilazàna ny zava-doza natrehany maso taorian'ny vonomoka tao Al-Shejaia:
Ao amin'ny Twitter, miteny amin'ireo 16.200 manjohy azy i Sana Saeed hoe :
Izao no fanamarinan-tena ataon'ny tafika Israeliana mba handarohany baomba ny trano, hopitaly, trano fivavahana ary sekoly. #Gaza  pic.twitter.com/jOP7h2KVND 
Mizara ity saribe ity ihany koa izy, avy amin'ny Hery Fiarovana Israeliana, izay mampiseho ireo “mpampihorohoro” miafina ao Gaza:
Ary marihany hoe :
Hatreto ny fahazoana antoka ny fitaovam-piadian'ny Israeliana dia azo antoka 80% amin'ny famonoana sivily.
Mandritra izany fotoana izany, Gregg Carlstrom, mpanao gazety mipetraka ao Tel Aviv mibitsika ho an'ireo 24.100 mpanjohy azy manao hoe :
Manomana fitokonana faobe ireo Palestiniana ao Israëly sy any Andrefan'i Cisjordanie, rahampitso, ary hanao hetsi-panoherana koa, farafaharatsiny any amin'ny lafy Israeliana.
Avy ao Gaza, ny Hamas, izay nifehy ny ao Gaza efa hatramin'ny 2007, dia nitifitra bala afomanga nankany Israely. Tsy naharava zavatra firy tany Israely ny ankamaroan'ireo tifitra bala afomanga natao, amin'ny ampahany dia noho ny rafi-piarovana Iron Dome, fiarovana ny habakabaka napetrak'i Etazonia, izay misambotra eny ampanidinana ny ankamaroan'ireo bala afomanga.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/21/62178/
 fahafatesan'ireo: https://mg.globalvoices.org http://time.com/2941362/bodies-of-missing-israeli-teens-found-in-west-bank-field/
 13 eo ny miaramila Israeliana maty: http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/Seven-Golani-soldiers-killed-in-Gaza-363528
 sary ity: http://occupiedpalestine.wordpress.com/2014/07/20/gazaunderattack-july-20-2014-in-photos/
 fonja an-kalamanjàna midadasika indrindra erantany: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/tales-from-gaza-what-is-life-really-like-in-the-worlds-largest-outdoor-prison-8567611.html